Mayelana NATHI - Ghorit Electrical Co., Ltd.
IGhorit Electrical Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2000, egxile ekwakhiweni, ekuthengisweni nasekusebenzeni kwemikhiqizo kagesi ephezulu.
Ghorit itholakala NO. I-111 Xinguang Road, iXinguang Industrial Zone, iLiushi Town, Isifundazwe saseZhejiang, enenhlokodolobha ebhalisiwe eyi-109.09 million CNY, ehlanganisa indawo engaphezu kuka-9,800m2 nendawo yokwakha engaphezu kwama-16,000m2.
IGhorit igxile kakhulu ezigabeni ezi-5 zemikhiqizo ene-voltage 6 ~ 40.5kV: ① izinto zikagesi zangaphandle ze-HV; Devices amadivayisi wokusabalalisa inethiwekhi ezenzakalelayo; App izinto zasendlini ezinamandla kagesi aphezulu; Switch high-voltage ephelele isethi switchgear nezinto; Uchungechunge lwe-high-voltage vacuum interrupter.
IGhorit idonsa ubuchwepheshe obuseqophelweni eliphezulu ekhaya nakwamanye amazwe, futhi izibophezele ekwenziweni nasekukhiqizweni kwemikhiqizo ephezulu. Ngo-2012, usethole iZhejiang Provincial Science and Technology Enterprise Certificate; ngo-2013, uye wathola High-tech Enterprise Certificate; ngalesi sikhathi, ithole inqwaba yezobuchwepheshe be-patent kazwelonke. Le nkampani ibilokhu ihambisana nomqondo oyisisekelo wokusinda ngekhwalithi ephezulu, idlulise i-IS09001: 2008 uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi, i-GB / T28001-2011 / OHSAS18001: 2007 amazinga ezempilo nokuphepha emsebenzini kanye ne-IS014001: 2004 amazinga wokulawulwa kwemvelo; ngowezi-2014 kwaphasiswa isiQinisekiso seGridi Yombuso seziqu zabahlinzeki; Ngo-2016, usethole isitifiketi sokufaneleka semfundo yokuthengwa kwempahla ye-Inner Mongolia Electric Power (Group) Co, Ltd. imikhiqizo yakwaGhorit inokusebenza nokusebenza okuningi emikhakheni ehlukahlukene efana ne-State Grid, i-South Grid, i-Petrochemical System, I-Power Generation Company, i-Railway, Ukuphathwa KukaMasipala, njll., Kanye nasezimakethe zomhlaba jikelele ezifana neRussia, i-Ukraine, iVietnam, iKazakhstan, iNew Zealand, iPeru, iPoland, iTurkey, njll.
IGhorit yakhe isistimu yokuphatha inethiwekhi esezingeni eliphakeme ye-ERP nohlelo olusiza amakhompiyutha. Ngamandla ayo obuchwepheshe aqinile, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile, izindlela zokuhlola eziphelele, ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo, futhi kuhlanganiswe nezidingo zokuthuthukiswa kwamandla wesimanje wasekhaya, iGhorit iyaqhubeka nokuthuthukisa ubuchwepheshe obuhola phambili emakethe nemikhiqizo emihle kakhulu engabizi. IGhorit inikezela amakhasimende ngezinga eliphakeme, imikhiqizo esezingeni eliphezulu nezinsizakalo ezinhle, futhi enza iminikelo emikhulu ekuthuthukiseni imboni yamandla.